शेयर बजारमा पछिल्ला दिनमा लगातार नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम हुन थालेका छन् । कोरोना कहरका कारण मुलुकभर नै निषेधाज्ञा जारी छ । आम मानिस घरभित्रै छन् । व्यापार व्यवसाय प्रायः ठप्प जस्तै छ । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकमा भने नयाँ खालका कीर्तिमान कायम भइरहेका छन् । नेपाल…
View More शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड
बिर्तामोड । झापा जिल्लामा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा अत्याधुनिक फन पार्क बन्ने भएको छ । यो फन पार्क विश्व चर्चित डिज्ने पार्क जस्तो हुनेछ । दमक नगरपालिकामा १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा पार्क बनाइन लागेको जानकारी पार्कका लगानीकर्ता मध्येका एक अजेयराज सुमार्गीले बताए । उद्योगी तथा व्यवसायी सुमार्गीका अनुसार दमकको वडा नम्बर…
ठगी अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी डा. रुप ज्योति हिरासत मुक्त हुने भएका छन् । डा. ज्योतिविरुद्ध ठगी अभियोगमा प्रहरीमा जाहेरी दिने विज्ञेन्द्रकृष्ण मल्लले जाहेरी फिर्ता लिएपछि विवाद सकिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उद्योगपति रुप ज्योतिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछी यो प्रकरण साम्य हुने भएको हो…
काठमाडौं । बिगत केही समयदेखी लगातार बढीरहेको सुनको मुल्य शुक्रबार सामान्य रुपमा घटेको छ । बिहीबार ७२ हजारमा कारोबार भैरहेको छापावाल सुनको मूल्य शुक्रबार ७१ हजार ८ सयमा कारोबार भैरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ७२ हजार कायम भएको सुन शुक्रबार तोलामै दुई सयले गिरावट आएको हो । शुक्रबार तेजाबी सुनको…
काठमाडौं । तिहारको पूर्वसन्ध्यामा जुन्जेली बुटिकको नयाँ शाखा इन्द्रचोक, चुरा गल्लीमा बिस्तार गरिएको छ । जुन्जेलीको बिराटनगर, कुपन्डोल पछि यो तेस्रो शाखा हो । शाखा शुक्रबार कलाकार दिपकराज गिरि र दिपाश्री निरौलाले रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको हो । मुलुकैभर खोलिएका थुप्रै बुटिकमा भन्दा फरक र आकर्षक डिजाइनका कपडाहरु रिजनेबल प्राइसमा…